बाँदरबाट सिकौं व्यावहारिक अर्थशास्त्र | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय बाँदरबाट सिकौं व्यावहारिक अर्थशास्त्र
अन्तरराष्ट्रिय, मुख्य खबर0views
बाँदरबाट सिकौं व्यावहारिक अर्थशास्त्र
शेयर बजार वा शेयरमूल्य ह्वात्तै घट्दा वा घरमूल्य धराशयी हुँदा पनि मानिसहरू अलि बढी चनाखो हुन्छन् भन्ने अपेक्षा हामी गर्छौं । तर, यस्तो हुँदैन । तिनीहरूले झन् बढी जोखीम मोल्छन् । भाउ दिनँहु घटिरहे पनि शेयर नबेची थुपारेर राख्छन् । आपूmसँग अहिले भइरहेको सम्पत्ति घटेर थोरैमा आउँछ भन्नेबारे मानिस सोच्नै सक्दैन ।
नेपालीमा एउटा उखान छ – बाँदरको हातमा नरिवल । बाँदरलाई सबैभन्दा चकचके, कुनै कुराको जतन नगर्ने, आनो घर नबनाउने र अरूको पनि भत्काउने प्राणीका रूपमा लिइन्छ । तर, हामीले बाँदरबाट पनि केही कुरा सिक्न सक्छौं, त्यो पनि पैसासम्बन्धी व्यवहारमा । पैसामा त मानिसले मात्रै कारोबार गर्छ । यसमा गरिने व्यवहार बाँदरजस्तो प्राणीले कसरी बुझ्ला भन्ने सोचाइ तपाईंको मनमा आउन सक्छ । येल युनिभर्सिटीमा संज्ञानात्मक विज्ञान र मनोविज्ञानकी प्राध्यापक लरी सान्तोषलगायत अनुसन्धाताहरूले बाँदरहरूमा गरेको एक प्रयोगले यस्तो देखाएको हो । यस प्रयोगको नतीजाले व्यावहारिक अर्थशास्त्र र जोखीमसम्बन्धी मनोविज्ञानबारे बुझाइ गहिरो बनाउनुको साथै समयसमयमा आउने आर्थिक सङ्कटका बेला हाम्रो अर्थतन्त्र किन बिग्रिन्छ भन्ने व्याख्या गर्न पनि सहयोग गर्दछ । अमेरिकाको प्युर्टो रिकोमा गरिएको यस प्रयोगमा ६ ओटा क्यापुचिन प्रजातिका बाँदर संलग्न गराइएको थियो । यी बाँदरहरूलाई हलिउड फिल्म जेम्स बण्डका पात्रहरूको नाम दिइएको थियो । अनुसन्धाताहरूले प्रयोगमा संलग्न बाँदरहरूलाई धातुको टोकन दिएर खानेकुरा किन्न सिकाएका थिए ।
यिनीहरूलाई सानो बजारजस्तो देखिने ‘सेट अप’मा राखिएको थियो । यस बजारमा प्रयोगकर्ताहरूले बाँदरलाई विभिन्न मूल्य लिएर थरीथरी खानेकुरा बेच्थे । यसरी सामान बेच्ने एउटा पसलमा सान्तोष स्वयम् पनि बस्थिन् । ‘बाँदरहरूले भाउलगायत कुरामा ध्यान वास्तवमै दिन्छन् कि दिँदैनन् ? तिनीहरूले आपूmसँग भएको टोकनको अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने थाहा पाउन हामीहरूले यो सेट अप प्रयोग गर्न सक्थ्यौं,’ सान्तोषले भनिन् । यस क्रममा फेला परेको कुरा निकै आश्चर्यजनक रहेको बताइएको छ । ‘थोरैमात्र तालीम पाउँदा पनि बाँदरहरूले सस्तोमा धेरै खाना पाइने पसलमा नै किने, जुन पसलबाट दोब्बरजत्तिकै खाना किन्न पाइयो बाँदरहरूले प्रायः त्यहीँ धेरै किन्थे,’ मङ्कीनोमिक्स (बाँदरको अर्थशास्त्र)बारे अध्ययनमा लामो समय बिताएकी सान्तोषले भनिन् ।
बाँदरले अवसरवाद जस्ता मानवीय गुणहरू पनि देखाए । अनुसन्धाताहरूको ध्यान अन्त भएको बेलामा यिनीहरूले त्यतिकै बेवारिसे अवस्थामा राखिएका टोकनहरू टिप्ने प्रयास पनि गरे । बाँदरको यस व्यवहारले टोकनलाई उनीहरूले महŒवपूर्ण वस्तुको रूपमा हेरेका रहेछन् भन्ने पनि देखाएको छ । तर, यहाँ मानिसहरूले बाँदरबाट पाठ सिक्न सक्ने महŒवपूर्ण कुरा भने जोखीम लिन चाहने मनोवृत्ति हो । यस प्रयोगमा अनुसन्धाताहरूले बाँदरलाई चयन गर्ने विकल्प पनि दिएका थिए । यिनीहरूले दुईमध्ये एक पसलेसँग कारोबार गर्न सक्थे । एउटाले तिनीहरूलाई २ टुक्रा खानेकुरा (यहाँ अङ्गुरका २ दाना) दिन्थे । यो केही गुमाउन नपर्ने सुरक्षित विकल्प थियो ।
तर, अर्को पसलेले भने टोकन लिएर तिनीहरूलाई एउटा अथवा तीनओटा अङ्गुरका दाना दिन्थे । दोस्रो कारोबारमा अलि बढी जोखीम थियो । आधाजस्तो समयमा एउटा मात्रै अङ्गुर पाइन्थ्यो अनि बाँकी आधामा चाहिँ तीनओटा । यसलाई मानवीय व्यवहारमा ढालेर बुझौं न । उदाहरणका लागि हामीसँग तीनओटा विकल्प छ । जुवाको एउटा दाउमा २ हजार डलर जित्ने पक्कापक्की छ भने अर्कोमा १ हजार डलर वा ३ हजार डलर पाउने सम्भावना आधा÷आधा छ । अब कुन दाउ खेल्ने वा नखेल्नेमध्ये तपाईं कुन विकल्प रोज्नु हुन्छ ? यस्तो स्थितिमा धेरैजसो मानिसहरूले सुरक्षित विकल्प रोजेर २ हजार डलरको दाउ रोज्छन् । बाँदरले पनि ठ्याक्कै यही नै गर्‍यो ।
भनिन्छ, बाँदरहरू पनि हाम्रै पुर्खा हुन् । बाँदर र मानिसको उद्विकासको इतिहास पनि एउटै खालको छ । तर, प्रयोगमा केही परिवर्तन गरेर बाँदरहरूलाई भिन्नै खालको विकल्प दिँदा पनि निकै रोचक नतीजा निस्कियो । यसबारे प्राध्यापक सान्तोष व्याख्या गर्छिन्, ‘जब बाँदर आयो अनि एउटा पसलेले हातमा २ दाना र अर्कोले तीन दाना अङ्गुर बोकिरहेको देख्यो, बाँदरको दिमागले पनि सम्भवतः ए अङ्गुरका तीन दाना पाइने मौका रहेछ भन्ने सोचेको हुनुपर्छ ।’ एउटा पसलेसँग कारोबार गर्न सुरक्षित छ भन्ने थाहा पाएपछि उसले हरेकपटक एउटै व्यवहार देखाउँछ । ‘बाँदरले तीनओटा अङ्गुर हातमा लिइरहेको व्यक्तिसँगै किन्यो, तर त्यो व्यक्तिले एउटा झिकेर बाँदरलाई २ ओटा अङ्गुरमात्रै दिन्छ भने यो त पक्का घाटा भइहाल्यो – सानो घाटा,’ अझ अगाडि सान्तोष भन्छिन् । दोस्रो पसले अलि जोखीमयुक्त छ । कहिलेकाहिँ उसले बाँदरलाई हातमा भएका सबै अङ्गुर दिन्छ अनि कहिलेकाहिँ २ ओटा झिकेर एउटामात्रै दिन्छ ।
यसलाई पनि मानिसले बुझ्ने तरीकाले हेरौं । जुवा खेलेर तपाईंले ३ हजार डलर बनाइसक्नुभयो । अब तपाईंसँग केही विकल्प छन् । १ हजार डलर हारेर २ हजार डलरमात्रै राख्ने कि अरू जुवा खेल्ने ? यसरी खेल्दा आधा जस्तो समय २ हजार डलर पनि हारेर तपाईंसँग १ हजार डलरमात्रै बाँकी रहन्छ । अनि आधाजसो समय भने तपाईंले हार्नु नै हुन्न । यस्तो स्थितिमा तपाईं के गर्नुहुन्छ ? अधिकांश मानिसहरू जुवा खेल्छन् र जोखीमपूर्ण विकल्प रोज्छन् । अचम्म लाग्दो त के छ भने बाँदरहरूले पनि यस्तै गरे । नोक्सान भइहाल्छ कि भन्ने डरमा शेयरको मूल्य घटिरहे पनि भविष्यमा बढ्ने आशामा मानिसहरू त्यसलाई विक्री गर्दैनन् । बाँदरहरूले पनि त्यसरी नै सोचेर पाइरहेको अङ्गुर गुम्दैन भन्ने सम्भावना देखेपछि मात्र ठूलो जोखीम लिन पनि तयार हुन्छन् ।
शेयर बजार वा शेयरमूल्य ह्वात्तै घट्दा वा घरमूल्य धराशयी हुँदा पनि मानिसहरू अलि बढी चनाखो हुन्छन् भन्ने अपेक्षा हामी गर्छौं । तर, यस्तो हुँदैन । तिनीहरूले झन् बढी जोखीम मोल्छन् । भाउ दिनँहु घटिरहे पनि शेयर नबेची थुपारेर राख्छन् । आपूmसँग अहिले भइरहेको सम्पत्ति घटेर थोरैमा आउँछ भन्नेबारे मानिस सोच्नै सक्दैन । यसलाई नै लस एभर्जन अर्थात् जोखीम पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्ति भनिन्छ । हामीसँग जन्मजात नै लस एभर्जन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ भने यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न हामी के गर्न सक्छौं ? सान्तोष भन्छिन् हाम्रो ध्वंसात्मक व्यवहारको विपरीत व्यवहार गर्न मानिसहरूलाई प्रेरित गर्ने कहिलेकाहिँ केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । यस्तै, एउटा उपाय हो बचत गर्नु ।
‘धेरै मानिसहरू बचत गर्न चाहन्छन्, तर आनो तलबबाट पैसा काटेर सीधै बचत खातामा राख्ने गर्दा केही गुमाएझै महशुस गर्छन्,’ सान्तोष भन्छिन् । यस्तो तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर प्राज्ञिकहरूले नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन्, त्यो हो आपूmले खाइपाइ आएको तलबबाट बचत गर्नुभन्दा बढेको तलबबाट केही रकम काटेर बचत गर्ने । यो रकमपछि आफैंले पाउने भएकाले केही गुमाएको जस्तो भावना कहिल्यै पनि आउँदैन । अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार विजेता व्यावहारिक अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर र अमेरिकी अर्थशास्त्री स्लोमो बेनार्ट्जीले ‘सेभ मोर टुमरो’ (स्मार्ट) योजना ल्याएका छन् । यो कर्मचारीहरूलाई सेवानिवृत्तिका क्रममा बचत गर्न झक्झकाउने चतुर उपाय हो । यो योजना चार चरणमा
सञ्चालित हुन्छ ।
यसको पहिलो चरणमा कार्यक्रम शुरूभन्दा निकै पहिला नै कर्मचारीहरूलाई कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रेरित गरिन्छ । त्यसैले यसबाट शुरूमै कुनै वित्तीय अप्ठ्यारो हुँदैन । वास्तविक पेन्सन योगदान कार्यक्रम अर्को वर्ष तलब नबढेसम्म शुरू नै हुँदैन । त्यसैले कर्मचारीहरूलाई अहिले खाइपाइ आएको तलबबाट गुमाउनुप¥यो भन्ने भावना नै आउँदैन । समय बित्दै जाँदा हरेकपटक तलब बढेसँगै पेन्सनमा बचत गर्ने रकमको आकार पनि बढ्दै जान्छ । यो रकम पहिला नै तय गरिएको अधिकतम स्तरसम्म मात्रै बढ्छ, त्योभन्दा माथि जाँदैन । अनि अन्त्यमा कर्मचारीहरूले कुनै पनि बेला यो कार्यक्रमबाट बाहिरिने निर्णय गर्न सक्छन् । यो अन्तिम चरण चाहिँ सधैं एउटै स्थितिमा रहूँ भन्ने मानवीय गुणमा आधारित छ । यसलाई अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा केही गर्नुभन्दा केही गर्दै नगर्नु सजिलो हो नि होइन र ?
पैसाको मामिलामा मानिसहरूले गर्ने निर्णय प्रायः अविवेकीजस्तै देखिन्छ । यस्तो व्यवहारका कारण मूल्यवृद्धिको फोका उत्पन्न हुन्छ र अन्त्यमा बजार नै धराशयी हुन्छ । कहिलेकाहिँ हामीले विनातुक खराब निर्णय गर्दा यस्तो हुन जान्छ । यो कुरा प्राध्यापक सान्तोष र उनको मङ्कीनोमिक्सले उजागर गरेको छ । यसको निष्कर्ष के हो भने कतिपय प्राकृतिक रूपमा आर्जित मानव व्यवहार यस्ता हुन्छन् जसलाई सजिलै बदल्न सकिँदैन ।
प्रस्तुति: रमा सुवेदी
११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०९:१५
११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०९:१३